हाम्रो युएसबी पेन्ड्राइभमा नक्कली फाइलहरू भर्नुहोस् ग्याजेट समाचार
सायद कसैले पनि किन महान कल्पनाको साथ आउने कारणको कल्पना गर्न सक्दैन "नक्कली वा नक्कली फाइलहरू सिर्जना गर्नुहोस्" तिनीहरूलाई USB पेनड्राइभमा बचत गर्न।
यो कार्य सम्पन्न भएको जस्तो अविश्वसनीयको रूपमा, यो मुख्य रूपमा प्रयास गर्नेमा केन्द्रित छ हाम्रो युएसबी फ्ल्यास ड्राइभमा सुरक्षा सुरक्षालाई सुदृढ पार्नुहोस्। अर्को शब्दमा, यदि यो पूर्ण रूपमा पूर्ण छ र एकल बाइट थप मिल्ने ठाउँ छैन भने, तब एक ट्रोजन, भाइरस वा मालिसियस कोड फाईलले तपाईंको वातावरणमा घुसाउन सक्षम हुनेछैन। यस अवस्था अन्तर्गत, हामी हाम्रो यूएसबी फ्ल्यास ड्राइभलाई कुनै पनि व्यक्तिगत कम्प्युटरमा मात्र लैजान सक्दछौं ताकि हामी उपकरणबाट कुनै पनि कम्प्युटरमा सूचना हस्तान्तरण गर्न सक्दछौं, जुन "पढ्नका लागि मात्र" कार्य मान्न सकिन्छ। केहि उपकरणहरू जुन हामी तल उल्लेख गर्नेछौं, यस प्रकारका झूटा फाइलहरू सिर्जना गर्न सम्भव छ जुन काल्पनिक हो।
युएसबी स्टिकमा नक्कली फाईलहरूको फाइद र विपत्ति
हामीले तल उल्लेख गर्ने धेरै जसो अनुप्रयोगहरूसँग सक्षम हुने क्षमता छ नक्कली फाइलहरू बनाउनुहोस्, जुन USB पेनड्राइभमा बचत हुनेछ। यी उपकरणहरू मध्ये केहीसँग अन्त्य गर्ने क्षमता हुँदैन जुन उनीहरूले पहिले सिर्जना गरेका थिए, अन्तिम प्रयोगकर्ता भएको कारण जसले यो कार्य म्यानुअल रूपमा गर्नु पर्छ। अर्कोतर्फ, प्रयोगकर्ताले खाली यूएसबी स्टिकमा रहेको खाली ठाउँ पनि जान्न प्रयास गर्नुपर्दछ, किनभने यी मध्ये केही उपकरणहरूले यस डाटालाई बाइट्स वा मेगाबाइटमा अनुरोध गर्दछ।
1. USB ड्राइभ संरक्षक
यो प्रयोग गर्नका लागि हाम्रो पहिलो विकल्प हुनसक्दछ, किनभने «USB ड्राइभ प्रोटेक्टर the को कार्य गर्ने इन्टरफेस एकदम सरल र पहिचान गर्न सजिलो छ।
हामीले सुरुमा दिएको सिफारिसको बावजुद, यो उपकरणले सजिलैसँग हाम्रो यूएसबी पेनड्राइभमा खाली ठाउँ चिन्न, सम्बन्धित फिल्डमा भर्न यस जानकारीको प्रयोग गरेर। त्यसकारण, प्रयोगकर्ताले परिभाषित गर्नु पर्छ यदि उसले यो गलत फाइल चाहान्छ भने USB फ्ल्यास ड्राइभको क्षमता अनियमित नाममा भरिने छ, केही अन्य सुविधाहरू बीच एक साधारण फाइल अनुरूप। यस उपकरणको अन्य विकल्पहरूमा लाभ यो छ कि यो आफ्नो ईन्टरफेस भित्रबाट हो तपाईं सजीलै सिर्जना गरिएको फाइल मेटाउन सक्नुहुन्छ सम्बन्धित बटन प्रयोग गरेर।
2. डमी फाईलहरू सिर्जना गर्नुहोस्
योसँग एक सरल र सजिलैसँग पहिचान गर्न मिल्ने ईन्टरफेस पनि छ, जहाँ उपकरणले द्रुत स्थान खाली गर्दछ जुन यूएसबी स्टिकमा खाली छोडिएको छ जुन त्यस समयमा प्रक्रियामा जाँदैछ।
प्रयोगकर्ताले सिर्जना गर्ने फाईलको प्रकार परिभाषित गर्न सक्दछ, त्यो हो, यदि यो "केवल पढ्न" मात्र हुन्छ ताकि कोहीले पनि यसलाई मेटाउन सक्दैन। यो पनि गर्न सक्छ यदि तपाईं यो फाइल "लुकेको" चाहनुहुन्छ भने निर्णय गर्नुहोस् र यो आफैंलाई पहिचान गर्दछ जस्तो कि यो "प्रणाली" को भाग हो। यस वैकल्पिकमा, उपकरणको ईन्टरफेसबाट सिर्जना गरिएको फाइल मेटाउने कुनै सम्भावना छैन, जसको मतलब प्रयोगकर्ताले यो कार्य गर्नुपर्नेछ (यसलाई मैन्युअल्ली मेट्नुहोस्)।
यदि माथि उल्लेखित विकल्पहरू तपाईंको लागि गाह्रो छ भने "USBDummyProtect" ले यसलाई "तपाईंको लागि सजिलो" बनाउनेछ। यो तथ्य यो छ कि यो उपकरण व्यावहारिक रूपमा एक्लै काम गर्दछ र प्रयोगकर्ताको हस्तक्षेप बिना।
तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको यूएसबी स्टिकमा यस उपकरणलाई डाउनलोड र राख्नुहोस् जुन तपाईं नक्कली फाइलहरूसँग भर्न चाहनुहुन्छ। जब तपाइँ यसलाई चलाउनुहुन्छ, उपकरणले "dummy.file" भनिने फाइल सिर्जना गर्दछ यो USB स्टिकमा खाली स्थानको अन्तिम बाइटमा पुग्छ। यसको साथ तपाईसँग "0" नि: शुल्क बाइट्स हुनेछ, कुनै पनि खराब कोड फाईललाई यस उपकरणमा सम्मिलित गर्न व्यावहारिक रूपमा असम्भव बनाउँदै। केवल दोष जुन एक यूएसबी पेनड्राइभको बिभिन्न ढाँचाको अनुकूलतामा हुन्छ, किनकि जब FAT वा FAT32 प्रकारको मात्र कार्य गर्दछ, अधिकतम ठाउँ जुन यस उपकरणले कभर गर्न सक्छ; जब यो खाली स्थान रिकभरी गर्न आवश्यक हुन्छ, प्रयोगकर्ताले मैन्युअल्ली यो प्रणाली द्वारा उत्पन्न गरिएको फाइल मेटाउनुपर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » हाम्रो युएसबी पेन्ड्राइभमा नक्कली फाइलहरू कसरी भर्ने
मलाई याद छ कि पहिले र सायद अब यी अनुप्रयोगहरू प्लेस्टेशन २ को डिभिडि बनाउनका लागि प्रयोग गरिएको थियो र अन्य पुरानो पुस्ताको कन्सोलले डिस्क सामग्रीमा अधिक आकार मात्र राख्छ ताकि तिनीहरू DVD मा जलाउन सकियोस् न सीडी। अझै तिनीहरू के प्रयोग को लागी धेरै व्यावहारिक।
तपाईं सहि मित्र हुनुहुन्छ, किनकि (मलाई लाग्छ) कि यो खराब ब्लकहरू राख्ने प्रयास गर्नु हो जुन भनिएको डिस्कहरूको प्रतिलिपि रोक्न यदि मैले गलत गरिन भने। तपाईको योगदानका लागि धेरै धेरै धन्यबाद, धेरै मूल्यवान किनभने हामी सबैलाई त्यस्ता जानकारी याद छैन जुन आज किस्सेवाट लाग्न सक्छ। राम्रो दिन
स्थानीय नेटवर्कमा सबै कम्प्युटरहरूमा फाईलहरू कसरी खोजी गर्ने